लेखकहरुलाई रोयल्टीमा समस्या छ - दामोदर न्यौपाने, लेखक, पत्रकार - फ्रन्टलाईन नेपाल
दामोदर न्यौपाने झण्डै १७ वर्ष भन्दा लामो समयदेखी मिडियामा सक्रिय छन् । हाल कान्तिपुर दैनिकमा आबद्ध न्यौपानेले सम्पदा, ऐतिहासिक धरोहर जस्ता विषयवस्तुमा कलम चलाईरहेका छन् । न्यौपानेले ‘शाहसिक पत्रकारिता पुरस्कार’, ‘श्रीधर आचार्य अन्तराष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार’, ‘तिरुपति साहित्य सम्मान’ हात पारिसकेका छन् । उनका एम्बुसमा ६ वर्ष, कर्म, स्कुल बेच्ने बालक, स्वर्णिम समय जस्ता पुस्तकहरु प्रकाशित छन् । बाल मनोविज्ञान बुझ्न, केलाउन र विश्लेषण गर्न उनी सिपालु छन् । न्यौपानेसंग फ्रन्टलाइन नेपालले गरेको कुराकानी :
तपाईं लेखनमा कसरी प्रबेश गर्नुभयो ?
मेरा लेखनका दुई पाटा छन् । एउटा अखवारी लेखन । अर्को पुस्तक लेखन । अखबारी लेखन यात्रा २०५९ सालबाट शुरु भयो । शसस्त्र युद्धको बेला थियो त्यो । युद्धको बेला समाचार लेख्नकै लागि दुर दराज गएको थिए । पुस्तक लेखन चाहिं २०७१ सालबाट भएको हो । युद्धको बेला, देखेका, भोगेका विषय किताबका रुपमा ल्याउनु पर्छ भन्ने हुट्हुटी जाग्यो । त्यही हुटहुटीले पुस्तक लेखनतिर डोर्‍यायो ।
स्कुल, कलेज पढ्दा जीवनमा के बन्ने सपना पाल्नु भएको थियो ?
मैंले त्यस्तो केही सपनै देखिन । पढाइ सकेर जागिर खानु पर्छ भन्ने थियो स्कुल पढ्दा । घर परिवारमा चिनिएका आफन्त हुनुहुन्थ्यो । उहाहरुले जागिर खोज्दिहाल्नु हुन्छ पो भनेर ढुक्क थिए । के जागिर खाने हो चाहिं थाहै थिएन ।
कलेज पढ्दा राजनीति पनि गरियो । राजनीति गर्दा पनि मन्त्री बन्छु भन्ने सपना पलाएन । अहिले पत्रकारिता गर्छु । पत्रकारिता गर्दा पनि प्रधान सम्पादक हुनु पर्छ भन्ने सपना देख्दिन । मैंले सधैं काममा विश्वास गरें । परिश्रमले जहा लान्छ लगोस् भने जस्तो छ मेरो जीवन । मैंले सपना देखाउने शिक्षा पढिन । सपना देखाउने मान्छेस“ग संगत गरिन । हाम्रो शिक्षाले हामीलाई सपना देख्न सिकाएन । कल्पना गर्न सिकाएन । तर स्कुल देखिनै मलाई लेख्ने सौख थियो । डायरी लेख्थें । निबन्ध लेख्थें । सायद तैंले लेखेर खानुपर्छ संकेत थियो त्यो ।
मिडियामा कसरी प्रबेश गर्नुभयो ?
कान्तिपुर दैनिकमा खुला प्रतिष्पर्धाबाट प्रवेश गरेको हु २०५९ सालमा । त्यस यता निरन्तर यही प्रकाशन गृहमा छु ।
प्रकाशकहरुले रोयल्टी नियमित दिन्छन् कि ठगेको उदाहरण पनि छन् ?
रोयल्टीमा समस्या छ । मैंले धेरै प्रकाशकसंग काम गरेकाले अलग–अलग अनुभूति छन् । म ठगेकै भन्ने शब्द त प्रयोग गर्दिन । तर रोयल्टीमा समस्या छ ।
एउटा पत्रकार लेखक हुनुका फाइदा के के छन् ?
पत्रकारितामा व्यक्त गर्न नसकिएका, व्यक्त गर्न नमिल्ने पुस्तकमा उल्लेख गर्न पाइन्छ । पत्रकारितामा सधैं अरुका कुरा मात्र बाहिर ल्याउनुपर्छ । पुस्तकमा आफ्ना कुरा पनि ल्याउन पाइन्छ । पत्रकारितामा सधैं अरुको कोट् गरेर लेख्नुपर्छ । आफूलाई थाहा भएका कुरा, आफूले बोले पनि हुने कुरा अरुलाई बोल्न लगाउनुपर्छ । पुस्तकमा आफैं बोलिदिए हुन्छ ।
प्रायः कुन समयमा लेख्न रुचाउनुहुन्छ ?
जुनसुकै समयमा पनि लेख्छु । लेख्न मलाई विशेष मुड बनाइराख्नु पर्दैन । विशेष मुड बनाएर लेख्नु भन्न थाल्यो भने मेरो लेखन गति कम हुनेछ भन्ने लाग्छ । पुस्तक लेखनचाहिं अफिसको काममा बाधा नपुग्ने गरि लेख्छु । बिहान, बेलुका र घर बसेका बेला जुनसुकै समयमा पनि पुस्तक लेखनमा सक्रिय हुन्छु ।
तपाईंको प्रिय बिधा कुन हो ?
गैर–आख्यान । किनभने मलाई सूचना चाहिएको हुन्छ । विषयवस्तु, भाषाशैली कस्तो रहेछ भनेर थाहा पाउन आख्यान पनि पढ्छु ।
तपाईका प्रिय लेखकहरु को को हुन् ?
धेरै छन् । यो, उ भनेर किन छुट्याउनु । मैंले पुस्तक पढेका लेखक सबै प्रिय लाग्छन् ।
पुस्तकमा सबैको एउटै रुचि हुदैनन् । मलाई मन परेको पुस्तक अरुलाई मन पर्छ भन्ने छैन । पुस्तक किन पढ्ने ? पहिला यो विषयमा प्रष्ट हुनुपर्छ । पुस्तकले हाम्रो जीवनमा केही न केही परिवर्तन ल्याओस् । हामीले दैनिक गर्न कामलाई केही न केही आइडिया दिन किताब सहयोगी बनोस् । मार्गदर्शन गरोस् त्यसले । आफ्नो क्षेत्रको ज्ञाता बन्नुस् तपाइ, ज्ञाता बन्न सहयोग गरोस् पुस्तकले । आफ्नो क्षेत्रमा अघि बढ्न सहयोगी हुने किसिमका पुस्तक पढ्नुपर्छ । तपाई बेरोजगार हो भने स्वरोजगार बन्न प्रोत्साहन गर्ने किसिमका पुस्तक पढ्नुस् । सीप सिकाउने पुस्तक पढ्नुस् । पशुपालन, कृषि, उद्योगधन्दा जस्ता उद्यम गर्न प्रोत्साहन गर्ने पुस्तक पढ्नुस् । यस्तो वर्गका लागि ‘सेल्फ हेल्प’ पुस्तक उपयोगी हुनेछ ।
तपाईका प्रिय पुस्तकहरु ?
म आफ्नो क्षेत्रमा सहयोग पुग्ने खालका पुस्तक पढ्छु । पहिला द्वन्द्वको बेला पत्रकारिता गर्दा राजनीति, युद्ध, पत्रकारिता सम्बन्धि पुस्तक पढें । त्यतिबेला ति विधाका पुस्तक प्रिय थिए । बालबालिका क्षेत्रमा काम गर्दा बालसाहित्य, शिक्षा, मनोविज्ञान जस्ता पुस्तक मेरा लागि प्रिय थिए । अहिले सम्पदा, संस्कृति, सभ्यता, संरक्षण, दर्शन जस्ता पुस्तक मेरा प्रिय छन् । यि विधाका पुस्तक पाएसम्म म किनिहाल्छु । मेरो मुख्य पेशा पत्रकारिता हो । म जुन बिटमा काम गर्छु, त्यही बिट् बुझ्न सहयोग हुने किसिमका पुस्तक पढ्छु ।
लेख्नका लागी समय कसरी छुट्याउनुहुन्छ ?
समय व्यवस्थापन गर्छु । रुटिन बनाएर अघि बढ्छु । खाने, हिंड्ने, सुत्ने सबै रुटिन हुन्छन् । सकेसम्म विहान घरबाट बाहिर निस्कन्न । त्यो समय केहीबेर परिवारलाई, केही बेर पुस्तक लेखनको लागि । बेलुका ८ बजे घर पुगि सक्छु । त्यसपछिको केही समय घर परिवारलाई दिन्छु अनि लेख्न बस्छु ।
अब कुन पुस्तक ल्याउने तयारीमा हुनुहुन्छ ?
मेरो अब आउने पुस्तक सम्पदा सेरोफेरोमा हुनेछ । सम्पदा हाम्रा पहिचान हुन् । पहिचान हाम्रो राष्ट्रियता हो । यही कुरामा जोड दिएर लेखेको छु । त्यसको नाम पनि छानिसकेको छु । छिटै सार्वजनिक गर्नेछु ।
Tagged एम्बुसमा ६ वर्ष, कर्म, कान्तिपुर दैनिक, दामोदर न्यौपाने, स्कुल बेच्ने बालक, स्वर्णिम समय
रिहालगत्तै पक्राउ परे विप्लवका जिल्ला इन्चार्ज
६ मंसिर २०७६, शुक्रबार १७:०६ November 22, 2019 फ्रन्टलाईन नेपाल
काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका पश्चिम नवलपरासी जिल्ला इन्चार्ज ‘सुमन’ उपनामका गंगा प्रसाद ज्ञवाली अदालतबाट रिहा भएलगत्तै पक्राउ परेका छन् । धरौटी रकम बुझाएर निस्कदै गरेका ज्ञवालीलाई माइक्रो बस लिएर पुगेका सादा पोशाकका प्रहरीले शुक्रबार दिउँसो अदालतको मुल गेट नजिबाटै पक्राउ गरेको हो। ४० हजार धरौटी नबुझाएपछि उनलाई गत जेठ १३ गते कारागार चलान […]
रोजी गिरी ‘युएस एम्बेसी युथ काउन्सिल’ मा छनौट
३ आश्विन २०७५, बुधबार १२:५९ September 19, 2018 फ्रन्टलाईन नेपाल
अशोज ३, काठमाडौं – तेक्वान्दोकी तेस्रो डन तथा राष्ट्रिय रेफ्री हुन्, काठमाडौं, जोरपाटीकि रोजी गिरी । त्यति मात्र होईन मिस टिन २०१५ कि फस्र्ट रनर अप उनी युनाइटेड नेसन्स योङ लिर्डस २०१६ मा समेत छनौट भएकी थिईन् । एकपछि अर्को गर्दै रोजीलाई सफलता मिल्दै गएको छ । यतिबेला उनी युएस एम्बेसी युथ काउन्सिल २०१८/१९ का […]
२५ चैत्र २०७६, मंगलवार २३:३६ April 7, 2020 फ्रन्टलाईन नेपाल
काठमाडौं, २५ चैत । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा खाना, बस्न र उपचारको अभाव झेलिरहेका नागरिकलाई पहिचान गरी नेपाल फर्काउने वातावरण मिलाउन आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले आज विपत्मा परेका नेपाल फर्कन इच्छुक नागरिकलाई कूटनीतिक पहल गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो । “नेपाल आउन इच्छुक नागरिकलाई […]
सामसुङले ल्यायो ६ वटा क्यामरा भएको फोल्ड हुने स्मार्टफोन
भारतमा नेपाली युवा टोली ८-० ले विजयी